Tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàn-dehibe : Jiolahy folo isan’andro no tra-tehaky ny polisy -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy fandriam-pahalemana eto an-tanàn-dehibe : Jiolahy folo isan’andro no tra-tehaky ny polisy
24/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafiditra ao anatin’ireo faritra voasokajy ho isan’ny hanjakan’ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny eto Antananarivo, indrindra fa any amin’ireo toerana betsaka olona mifamezivezy. Araka ny fanadihadiana sy ny angom-baovao natao dia fantatra fa tsy latsaky ny folo isan’andro ny jiolahy sy ny tontakely voasambotr’ireo polisy, isaka ny boriborintany eto an-drenivohitra. Tafiditra ao anatin’izany ireo mpamaky trano, mpanendaka, mpanao sinto-mahery, mpangalatra ireny fananana iombonana ireny, sy ireo asa ratsy hafa matetika handrenesam-peo eny anivon’ny fiarahamonina eny. Noho ny hetsika sy ny ezaka nataon’ny teo anivon’ny polisim-pirenena amin’ny fisafoana hatrany ny tanàna, dia tovovavy 16 taona sy tovolahy mbola tsy ampy taona ihany koa no tratran’ny polisy am-bodiomby teo am-pangalarana ireny “batterie”, mampandeha ireo jiro eny amin’ny Rocade, tamin’iny herinandro iny. Raha ho an’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany etsy Analakely izao dia misy foana ny hetsika manokana ho famongorana ireo mpanedaka any anaty olona, any anaty tsena any, izay mampitaraina ireo.
“Miezaka ny fitondram-panjakana manome fitaovana hahatanteraka sy hamongorana ny asa ratsy rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Eo ihany koa ny fiaraha-mientana sy ny fandraisan’andraikitry ny polisy, zandary ary ny miaramila, ka tsy ny eto an-drenivohitra ihany no hanaovana hetsika, fa voakasika amin’izany ihany koa ny any ambanivohitra”, hoy ny fanazavana nomen’ny “commissaire central” Tsaramonina Ravony. Nambarany ihany koa fa adidin’ny rehetra ny fampandriana fahalemana ny firenena, izay miainga amin’ny isam-batan’olona tsirairay avy . “Miankina amin’ny fiarahamonina ny mahatsara na ny maharatsy ny vokatra. Eto amintsika ihany mantsy no ipoiran’ireny olona mandika lalàna ireny”, hoy hatrany ny tenany. Nohamafisin’ny kaomanda Andrianarisaonina Herilalatiana ihany koa izay voalaza izay. “ Olona eny anivon’ny fiarahamonina eny ihany, no manatanteraka sy ao ambadik’ireny asan-jiolahy maro isan-karazany miseho eto an-tanàn-dehibe ireny”, hoy ity tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity. Mitohy hatrany moa ny hetsika hataon’ireo kaomisaria ao anatin’ny boriborintany valo ireo ary nilaza ihany koa ny kaomisera Tsaramonina Ravony fa miasa foana ny eo anivon’ny polisim-pirenena rehefa mahazo fampilazam-baovao mombana asan-jiolahy na zavatra mampiahiahy eny anivon’ny fiarahamonina eny.
Hery Rajaonarimampianina : “Mila ilay fahaterahana vaovao i Madagasikara”